Efa herinandro io ary ranon-dolana ny filazan’ny mponina eny azy. Araka ny fanazavan’ny manodidina, misy tatatra fanarian-drano tsentsina kanefa nisy fantsona mpitondra rano vaky ihany koa nanampy trotraka ireo rano maloto avy nampiasain’ny mponina eny amin’iny faritra iva iny ka mahatonga izao tondra-drano izao. Araka ny fampitam-baovaon’ny tompon’andraikitry ny fokontany iray, misy fahasimbana ny milina fitrohan-drano na “groupe éléctrogène” fampiasa amin’iny faritra iny izay famarinana ny rano amin’ireo tatatra lehibe eny an-toerana, indrindra amin’ny lakandranon’Andriantany ka mahatonga ny rano miakatra mampitohy an’Antohomadinika sy Isotry. Voalaza fa raha vao tsy miasa io gropy io na tojo fahatsentsenana ny fantsona dia dibo-rano iny faritra iny. Miandrandra ireo manampahefana eny an-toerana sy amin’ny foibe ny mponina sy ny mpampiasa lalana.